कंगनाको प्रश्न, ‘सुशान्तको सुसाइड थियो कि प्लान गरिएको मर्डर ?’ « रंग खबर
कंगनाको प्रश्न, ‘सुशान्तको सुसाइड थियो कि प्लान गरिएको मर्डर ?’
रंगखबर, काठमाडौँ – बलिउड अभिनेत्री कंगना रनाउत स्पष्ट वक्तामा रुपमा चिनिन्छिन । उनि बलिउडका नराम्रा पक्षको बारेमा खुलेरै बोल्छिन, ‘उनलाई कसैले साथ दियोस् या नदियोस् ।’
विशेष गरि उनलाई बलिउडमा नातावादको विषय मन पर्दैन । अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको आत्महत्यालाई पनि उनले बलिउडमा नातावादले निम्त्याएको योजनावद्द हत्या तर्फ औँल्याएकी छन् ।
उनि भन्छिन ‘सुशान्त कमजोर थिएनन्, एउटा र्याङ्क होल्डर कसरी कमजोर हुन् सक्छ ? बलिउडले उनको क्षमता र कामलाई कहिले पनि हौसला दिएन । पछिल्लो इन्टरभ्युमा उसले दर्शकलाई मेरो फिल्म हेरिदिनुस, मेरो कोहि गडफादर छैन । नत्र मैले बलिउडमा काम पाउनेछैन । किन मलाई यो उद्योगले अपनाउदैन ? भनेको थियो ।’
कंगना अगाडी प्रश्न गर्छिन ‘के यस घटनाको अरु कुनै कारण छैन ? ‘काइ पो चे’ जस्तो फिल्म गर्ने मान्छेलाई कुनै डेब्यु अवार्ड पनि छैन ? यहाँ ‘गली व्वाय’जस्तो बकवास फिल्मलाई पुरै अवार्ड दिईन्छ तर, ‘छिचोरे’ जस्तो राम्रो फिल्मले अवार्ड नै पाउदैन ।’
करिब २ मिनेट लामो भिडियो संदेशमा कंगनाले नन फिल्मी ब्याकग्राउण्डका कलाकारलाई बलिउडकर्मीले कहिले नअपनाएको बताउछिन । ‘मैले पनि फिल्म निर्देशन गरेकी छु । मेरो सुपरहिट फिल्मलाई यहाँ फ्लप घोषित गरिन्छ । किन म विरुद्द ६ मुद्दा चलाइयो । किन मलाई जेल हाल्ने कोशिस गरियो ?’
यिनीहरुको चम्चे-पत्रकार जो छन् । सुशान्त जस्तो कलाकारविरुद्द जो ब्लाइन्ड आइटम लेख्छन, ‘उ साइक्रोटिक हो, न्युरोटिक हो, एडिक्ट हो । तर, संजय दत्तको एडिक्सन त तपाईलाई एकदम क्युट लाग्छ । उनिहरु मलाई पनि म्यासेज गर्छन, ‘तिम्रो गाह्रो समय चलिरहेको । यस्तो बेलामा कुनै नराम्रो कदम नउठाउनु ।’ मलाई किन यस्तो भन्छौँ ? किन मेरो दिमाग भर्न चाहान्छौँ कि ‘तिमि सुसाइड गर’ । यसलाई सुसाइड भन्नु हुन्छ कि मर्डर ?
सुशान्तको एक मात्र गल्ति उसले मानिहाल्यो कि उ बेकम्मा हो । जसले उसलाई ‘तेरो केहि हुनेवाला छैन’ भने । उसले यहि कुरा मानेर ज्यान दियो ।